Shiinaha Apple, pear, canab, mashiinka farsameynta rummaanka iyo warshaddii soo -saarka iyo soo -saareyaasha | BOOD
Tufaax, pear, canab, mashiinka waxsoo -rummaanka iyo khadka wax -soo -saarka
Tufaaxa, pear, canabka, mashiinka waxsoo-rummaanka iyo xirmada xariijinta wax-soo-saarka: dhalada dhalada, dhalada caagga ah ee PET, zip-top can, xirmo jilicsan oo aseptic ah, kartoon leben ah, kartoonka sare ee gable, 2L-220L bac aseptic ah oo ku jirta durbaan, baakad kartoon, bac , Qasacad qasacad 70-4500g.
Tufaaxa, pear, canabka, mashiinka ka shaqaynta rummaanka iyo khadka wax -soo -saarka ayaa ku habboon ka shaqaynta tufaaxa, pear, canabka iyo rummaanka. Waxay soo saari kartaa casiir cad, casiir qallalan, casiir urursan, budada miro, macaanka miraha. Khadka wax -soo -saarku wuxuu inta badan ka kooban yahay wiishash -xoqe, nadiifiye xumbo, nadiifiye burush, preheater, mashiinka wax -hagaajinta, burburiye, garaac, juicer, juicer suunka, centrifuge fur -qumman, centrifuge balanbaalis, qalabka wax -sifeynta, qalabka sifeynta, qalabka xayeysiinta cusbi, sifeynta kaarboonka ee firfircoon qalabka, qalabka qurxinta, nidaamka hydrolysis enzymatic, homogenizer, degasser, mashiinka jeermis-tuubada-tuubada iyo mashiinka buuxinta aseptic. Khadka wax -soo -saarku wuxuu leeyahay fikrad naqshadeyn horumarsan iyo heer sare oo otomaatig ah; qalabka ugu muhiimsan wuxuu ka samaysan yahay bir aan tayo lahayn oo tayo sare leh, kaas oo si buuxda u buuxiya shuruudaha nadaafadda ee ka shaqaynta cuntada. Qalabka waxsoosaarka tufaaxa ayaa la sameeyay oo la soo saaray si buuxda u nuugaya fikirka naqshadeynta horumarsan ee Yurub iyo Ameerika. Shirkaddu waxay leedahay qaabab ganacsi oo taxane ah oo aad u wanaagsan oo leh awood dhammaystiran oo ka timaada naqshadeynta iyo horumarinta mashruuca, wax soo saarka iyo wax-soo-saarka, rakibidda iyo ka-saaridda tababarka farsamada iyo adeegga iibinta kadib.
* Awoodda Hawlgelinta laga bilaabo 3 tan / maalin ilaa 1500 tan / maalin oo ah miro daray ah.
* Waxay ka shaqaysiin kartaa miraha leh sifooyin la mid ah, sida cambaha, cananaaska, iwm.
* Waxaa lagu nadiifin karaa buufin badan iyo nadiifinta buraashka
* Casiirka suunka ayaa kordhin kara heerka soosaarka casiirka cananaaska
* Makiinad fiiqaysa, diidmada iyo mashiinka garaaca si loo dhammaystiro ururinta casiirka
* Ku -fiirsiga faaruqinta heerkulka oo hooseeya, si loo hubiyo dhadhanka iyo nafaqooyinka, oo si weyn loo badbaadiyo tamarta.
* Jeermiska tubbada iyo buuxinta aseptic si loo hubiyo xaaladda aseptic ee sheyga.
* Iyadoo leh nidaam nadiifin CIP oo otomaatig ah.
* Qalabka nidaamka dhammaantood waxaa laga sameeyay 304 birta birta ah, oo si buuxda u buuxisa shuruudaha nadaafadda cuntada iyo badbaadada.
Tufaaxa, pear, canabka, mashiinka waxsoosaarka rummaanka iyo dabeecadda xariijinta wax soo saarka: (1) marka la raacayo burburka Apple, iyadoo la tixgelinayo dhacdada browning enzyme, waxaan isticmaalay habka lagu buufiyo isoascorbic acid halka la jajabinayo si looga hortago enzyme engeegga polyphenol oxidase soo -gaadhista iyo taabashada oksijiinta inta lagu jiro habka burburka; (2) inta lagu gudajiro casiiridda, iyadoo la tixgelinayo inay weli jiraan tiro aad u badan oo tufaax cagaaran ah Australia pectin way adag tahay in la jebiyo, unugyada unuggu way adag tahay in la jabiyo, casiirkuna waa adag yahay in la tuujiyo. Naqshadani waxay qaadataa habkii lagu burburin lahaa pectin ka hor intaan la daadin, iyadoo la adeegsanayo saamaynta Pectinase si loo burburiyo pectin si loo hagaajiyo dhalidda casiirka; (3) si loo hagaajiyo heerka caddaynta casiirka, isku -darka hydrolysis enzymatic iyo farsamada xuubka ultrafiltration waa la qaatay.
Hore: Saytuunka, tubta, bayberry, miro guduud, abrikot, mashiinka wax lagu karsado iyo xariijinta wax soo saarka
Xiga: Qalabka Cabitaanka Iyo Khadka Waxsoosaarka
Khadka soo -saarka sharoobada taariikhda cusub
Canbaha, cananaaska, babayga, mach ka shaqaynta guava ...
Jinka yaanyada, mashiinka wax lagu kariyo suugo shiil ...
Mashiinka buuxinta ketchup yaanyo filsa salsa fil ...